Xog: Laba arin oo sababtay in Dawlada Faderaalku ay xabsi ku sii heyso Sheekh Mukhtaar Roobow
Wednesday May 15, 2019 - 13:33:12 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by . .
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa muddo ku dhow 150 maalmood ku xiran Xabsi ay maamulaan Ciidamada Nabad Sugidda Soomaaliya, oo ku yaala taliskooda ugu wayn ee Habar Qadiijo, waxaana isa soo taraya qayla dhaanta loo jeedinayo dowladda ee ah in la sii daayo Abuu-Mansuur.
Ilaa hadda ma jirto maxkamad la soo taagay Abuu Mansuur, waxaana dad badan ay u arkaan xeraggiisa inuu yahay mid Sharci darro ah, ayada oo lagu eedeeyay hogaanka dowladda Soomaaliya in ay is hortaageen heshiiyo badan oo lagu sii deyn lahaa Abuu Mansuur.
Shalay oo ugu dambeysay magaalada Baydhabo waxaa kulan ay ku yeesheen digniin ka soo saaray siyaasiinta iyo odayaasha beelaha digil iyo mirifle kuwaas oo sheegay in ay Afduuban doonaan nin saameen leh oo ku dhow Madaxweynaha Soomaaliya.
Caasimada Online ayaa ogaatay in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ay Dowladda Soomaaliya u heysato laba arin oo kaliya kuwaas oo kala ah.
1 – Abuu Mansuur waxa uu heestaa dhalinyaro hubeysan oo leh awood ciidan kuwaas uu ku mucaaradi karo dowladda Soomaaliya, waana qodob kamid ah waxyaabaha ay uga cabsi qabto sii dees-madiisa.
2 – Waqtiga dowladda oo gabaabsi ah, haddii ay dowladda Soomaaliya sii deyso Abuu Mansuur waxa uu ka mid noqonayaa mucaaradka Dowladda ee dhanka siyaasadda ,waxana uu ku wiiqayaa awoodda dowladda saameentiisa siyaasi iyo midda deegaan, waana sababta labaaad oo ay dowladda Soomaaliya uga cabsi qabto Abuu Mansuur. Dowladda Soomaaliya oo rajo ka qabta doorashada 2020-ka hadii ay sii deyso Abuu Mansuur oo ka saameen Lafta gareen waxay aaminsan tahay in ay lumin doonto degaanadaasi.
Arimahaas ayaa la sheegay in ay yihiin qodobada ugu waa-wayn oo ay Dowladda Soomaaliya Xabsiga ugu sii heyso Abuu Mansuur oo ah hogaamiye saameyn ballaaran ku leh degaano badan oo Soomaalida degto gaar ahaan dhulka Koonfur Galbeed iyo beelaha ku heebta Roobow.
Soomaali iyo ajaaniib la kulantay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa isku dayday in la sii daayo Abuu Mansuur, balse waxay madaxda dalka ku adkeesteen in aysan sii deyn doonin Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo bishii December laga xiray magaalada Baydhabo ee xarunta Gobalka Bay.
Faah-Faahin laga Helayo Dagaal Culus oo la sheegey in uu Dhexmaray Ciidamada Dawlada Soomaliya iyo Al-Shabaab iyo sida ay wax udhaceen
Daawo:Waraysi Dhinacyo Badan Taabanaya oo laga Qaaday Wasiirka Wasaarada Gadiidka Iyo Horumarinta Jidadka Somaliland iyo Arimaha uu kaga Hadlay